अंगप्रदर्शन गर्न�� भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तो लगाउँदिन :सोनीया – Kantipur Hotline
काठमाडौं ज्येष्ठ ६,नेपाली चलचित्रमा धेरै नायिका अभिनयका कारण होइन यौन मामिलामा उदार भएका कारण चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यही सिलसिलामा जोडिएकी छन् नवनायिका सोनिया केसी, चलचित्र सिलसिलामा उतेजित अधर चुम्बनको दृष्य दिएर चर्चामा आएकी नवनायिका सोनीया केसी संगको भलाकुसारी ।
नगर्ने भन्ने कुरा छैन । कस्तो मेसेज दिने फिल्म हो, कस्तो स्टोरी छ, त्यो हेरेर राम्रो रैछ भने गर्छु ।
भन्ने प्रश्न लाई सहज रुपमा लिदै सोनियाले उत्तर दिईन : नगर्ने भन्ने कुरा छैन … । तर साथै, उनले अहिलेसम्म सेक्सको अनुभव भने नगरेको बताइन।
– तपाईको फोटोहरु त निकै हट छन नि सिनेमा बढी पाउने आशा हो ?
सिनेमा पाउन कै लागि त हैन । जमाना अनुसार त्यतिको त खिच्नै पर्‍यो नि हैन र ।
– भनेपछि खुलेर अंगप्रदर्शन गर्नसक्नु हुन्छ ?
भयंकर अंगप्रर्दशन गरेर, शरिर देखाएर त्यही खालको नायिका बन्ने सोच हैन मेरो । कुन डेस लगाउँदा सुहाउँछ त्यही लाउने हो । अंगप्रदर्शन गर्ने भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तो लगाउँदिन । नगर्ने भन्ने हैन ठिक्क गर्नुपर्छ ।
– तपाईंको विहे गर्ने उमेर भैसक्यो हैन ?
– विहे गर्ने समय नै आएको छैन जस्तो लाग्छ । अझै सिनेमा क्षेत्रमा सघर्ष गर्ने योजनामा भएकाले विहे बारे केही सोचेकी पनि छैन ।
– ब्वायफ्रेण्ड त होलान् नि ?
छैन, छैन अहिलेसम्म ।
– नव नायिकाहरु फिल्म खेल्नकै निर्माता, निर्देशकहरुको गर्लफ्रेण्ड बन्ने गर्छन नि ? – कतिपय त्यस्ता पनि होलान, तर म त्यस्तो गर्ने पक्षको मान्छे हैनन । आफ्नो क्षमताले यस क्षेत्रमा आउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
– उमेर कति भयो नि ?
– हत्तेरिका उमेर पनि सोध्ने ?
– हिरोइनहरु उमेर भन्न किन डराउँछन ?
त्यस्तो होइन, म भरखरै २२ बर्षको भएँ ।
– आफुलाई कतिको सेक्सी मान्नु हुन्छ ?
– सेक्सी नै ठान्छु, अरुले पनि भन्छन ।
सेक्सलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
यो एउटा प्राकृतिक जैविक कुरा हो । मानवीय आवश्यकताको कुरा हो
– विवाहपूर्वको सेक्स उचित हो ?
– हैन जस्तो लाग्छ ।
सेक्सको अनुभव छ कि ?
आइ एम सरी, मलाई अनुभव छैन ।
यत्रो उमेरमा पनि छैन ?
– छैन, छैन, भए पो त छ भन्ने । स्रोत :मायाको संसार.com
राम्रो भन्दा हाम्रो मोडेल रोज्ने प्रवृतिनै प्रमुख समस्या :उज्वल